61 ESSENTIAL STEPS FOR STARTING A BUSINESS - Sicko News
Marka waxaad u maleyneysaa inaad diyaar u tahay inaad ganacsi gasho? Taasi waa wax weyn! Ku biiriyeha Forbes Jeff Rose wuxuu ugu yeerayaa ganacsi abuurka mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu dhiso dhaqsaha badan, hadii aad talaabsato, waxaad tirineysaa naftaada 28 million milkiileyaasha ganacsiga Mareykanka ee wadida 40% dhamaan tafaariiqda iibka ee wadanka.
Laakiin ka hor intaadan dhammaan u-galin aragti-ganacsiyeedkaaga, tallaabo dib u qaado oo fiiri ilo-hoosaadka ku yaal. Maamulka Ganacsiga Yar ee Mareykanka ayaa sheegay in 50% ganacsiyada yar yar ay ku dhacayaan sanadka koowaad. Baadhista badan ee aad samayso wakhti ka hor – iyo jawaabaha aad la soo baxdo – waxay u badan tahay inaad ku dhici doonto 50% guuleysta.
Tixgalinta hoos lagu sharaxay waxay ka tarjumayaan go’aamada aad u baahan tahay inaad sameyso ka hor intaadan si rasmi ah u furin meheraddaada. Waxay noqon kartaa tijaabin inaad ka booddo qaar ka mid ah si aad fikradaada dadka ugu soo qaadid sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah, laakiin taxaddar yeelo. Ku guuldaraysiga in sifiican loo qorsheeyo markan howshu waxay sababi kartaa musiibo wadada.
Qaado waqti aad ku bilowdo meheraddaada aasaas adag oo mid kasta oo ka mid ah talaabooyinka soo socda.
1. Dooro inta udhaxeysa bilowga ama meheradaha jira / Franchise- In kasta oo ganacsato badani bilaabaan hawlahooda si ay ugu faa iideystaan ​​”fikradahooda waa weyn”, kuwa kale ayaa jaraya marxaladda bilowga iyagoo gaagaya goob franchise ah ama iibsanaya ganacsi madaxbannaan, madaxbannaan. Adeegso tilmaamaha ‘Intuit’ si aad uga caawiso go’aan qaadashada- “Iibsashada Tirada Franchise oo Bilaabaysa Ganacsigaaga.
2. Samee Daraasad Suuqa Bilowga ah – Haddii aad adigu ganacsi bilaabayso ama mid mid iibsaneyso, cilmi baarista suuqa waa muhiim. Ugu yaraan, waxaad u baahan tahay inaad ogaato cidda ay yihiin macaamiisha bartilmaameedkaagu yahay, waxa ay u baahan yihiin badeecadaada iyo adeegyadaaga, cidda tartamayaashaadu bannaan yihiin, iyo waxa kharashaadkaagu noqon doono si fikraddaada aad u suuq geyso. Wixii intaa ka badan oo ku saabsan samaynta cilmi-baarista suuqa ka hor, fiiri Business-How-Kheyraadka- “Sida loo Sameeyo Daraasad Suuqa Suuqa Saxda ah.”
3. Aqoonso Muuqaalkaaga – Sida ku xusan qoraalka ‘Brenda Do of BL copywriting’ –
“Haddii macmiilkaaga kuugufiican uu kuu yimaado oo uu ku weydiiyo, ‘Maxaan adiga wax kaaga iibsadaa halkii aan ka iibsan lahaa ninka kale?’ Ma ku siin kartaa jawaab qasab ah toban kalmadood ama ka yar? Taasi waa waxa soo jeedinta iibinta qaaska ah (USP) sameeyo.
Haddii aadan weli ka jawaabi karin su’aalahan, fiiri Fizzle.co ‘Tilmaanta ugu dambeysa ee Helitaanka Soojeedintaada Iibinta ee Gaarka ah. ”
4. Magacaabi Meheraddaada – Magaca ganacsigaaga ayaa sameyn kara ama jebin kara guulahaaga. Waxay ku dhegi doontaa maanka macaamiisha mustaqbalka, ama waa la ilaawi doonaa ka mid ah xayeysiiyaasha kale ee u tartamaya inay fiiro gaar ah yeeshaan. Xulo magaca saxda ah adiga oo adeegsanaya tusaha ‘Balance’ – 5 Talooyin ee Xusha Magaca Magac Ganacsi Yar Yar. ”
5. Raadi Deeqaha ama Caawimaada Maaliyadeed – Adiga oo celcelis ahaan ubaahan baahiyaha bilowga ee meherad cusub oo fadhiya 29,000 doolar oo ku baahsan warshadaha, lacag kasta oo lacag la’aan ah oo aad ka heli karto waxay kaa caawin kartaa fududeynta culeyskaaga dhaqaale. Fiiri liiska buuxa ee Fundera ee xulashooyinka- “Ma Dooneysaa Lacag Bilaash ah? Hubi Liiskan 108 Deeqaha Ganacsiga Yaryar.”
6. Qor Qorshe Ganacsi- In kasta oo qorshaha meheraddu aanu si daruuri ah u ahayn hadaanad raadin doonin maalgalin ama maalgelin, dokumenti si wanaagsan loo tixgeliyey ayaa kaa caawin kara inaad la qabsato macaamiisha aad u adeegayso iyo sida aad u taageeri doonto iyaga (hab dhaqaale ahaan wax loo badbaadiyo). Ku bilow tilmaamaha ‘Discover Business’s Guide’ – Sida loo qoro Qorshe Ganacsi. ”
7. Saxeex heshiis kiro ah Meherad Ganacsi – Mar labaad, waxaa laga yaabaa inaad u baahan tahay ama uma baahnid kheyraadkan gaarka ah. Haddii aad sidaas yeelatid, si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay meel bannaan oo ganacsi, la soco in heshiiska kirada guryaha ay ka kooban yihiin shuruudo iyo qodobo cusub oo aadan fahmi karin haddii aad waligaa wax ka qabatay kireysiga guryaha. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shuruudaha heshiiska kirada iyo eraybixinta ereyada, fiiriso Warbixinta Fit Small Business ‘Sidee loo Kiraysiiyaa Ganacsi Real Estate.
Su’aalaha Sharciga ah
Fikradda ah shaqaalaysiinta garyaqaan ganacsi – oo laga yaabo inay kugu soo dalacaan meelkasta oo $ 150 ilaa $ 1,000 saacaddii ah – waxay noqon kartaa mid dhib badan markii aad kujirto marxaladaha ugu horreeya ee shirkadaada.
Xusuusnow, si kastaba ha noqotee, wiqdiga ka hortagga sharciga ahi wuxuu ku kacayaa hal rodol oo daawo ah. Bixinta qareenka si uu kaaga caawiyo sameynta meheraddaada sida saxda ah waxay kugu kacaysaa inaad aad uga yar tahay inaad sameyso isbeddelo sharci ah (ama kaba sii dara, inaad dacwadda geyso) wadada.
8. Go’aan ka gaadho Qaab-dhismeedka Sharci ee Ganacsigaaga – Laga soo bilaabo mulkiileyaasha iskaashatada ilaa LLC-yada, iyo iskaashatada ilaa shirkadaha, qaabab sharciyeed oo kaladuwan ayaa u jira ganacsiyada kuwaas oo leh faa’iidooyin iyo khasaarooyin kala duwan. Samee daraasaddaada wakhti ka hor si aad u ogaatid midka sida ugu habboon ugu habboon baahiyahaaga, oo tixgeli inaad raadsato talo sharciyeed si aad u gaarto go’aanka saxda ah. Maqaalka Alex Katz ee Ganacsadaha ‘Article’ Go’aaminta Qaabdhismeedka Sharci ee ugu Fiican Ganacsigaaga ‘way caawin kartaa.
9. Hel Ruqsadahaaga Ganacsi – Qaar, laakiin aan ahayn dhammaantood, ganacsiyadu waxay u baahan yihiin dalbashada iyo helitaanka shatiyada – ha ahaato dowlad goboleed, federaal ama labadaba – ka hor intaadan bilaabin hawlgallada. Guud ahaan, waxaa looga baahan yahay ganacsatada maaraynta xasaasiga ahwaxyaabaha (sida aalkolada ama qoryaha hubka) ama ganacsiyada ku wajahan adeegga ee ay tahay inay la kulmaan heerar xirfadeedyo qaarkood (sida takhaatiirta, qareennada ama qandaraasleyaasha). Tilmaanta ‘SBA’ ee “Shatiyada Ganacsiga & Oggolaashaha Ganacsi” waa goob wanaagsan oo lagu bilaabi karo.
10. Diiwaangelinta Meheraddaada – Mar alla markii aad dooratid qaab dhisme sharciyeed iyo magac, waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso mas’uuliyiinta ku habboon (oo ay ku jiraan magacyada diiwaangelinta, maamulka canshuuraha, keydka macluumaadka loo shaqeeyaha iyo kuwa kale). Mar labaad, Maamulka Ganacsiga Yaryar ee Mareykanka ayaa kuu sheegay – “Dooro & Diiwaangali Meheraddaada.”
11. Raadi Qareen – Qareennada ganacsigu uma eka inay raqiis yihiin, laakiin waxay noqon karaan xulafadaaga ugu weyn sidii aad shirkaddaada cusub uga dhigi lahayd inay si habsami leh u shaqeeyaan. Garyaqaanku wuxuu kugula talin karaa waxkasta, laga bilaabo diiwaangelinta meheraddaada ilaa ilaalinta hantidooda iyo adeegyadeeda mustaqbalka – hubi inaad doorato qofka ku habboon shaqada. Maqaalka Nolo, “Sida Loo Helo Qareen Sare,” ayaa kaa caawin doona inaad hesho wakiil la awoodi karo, oo waxtar leh.
12. Badbaadi IP-gaaga – Haddii shirkaddaadu ku dhisan tahay hanti aqooneed oo u gaar ah hay’addaada, ilaalinta waa inay noqotaa mid ahmiyadahaaga ugu sarreeyaa. Maqaalka Kelly Fitzsimmons Inc. ee ku yaal “10 Siyaabo oo lagu Badbaadiyo Hantidaada Maskaxda” ayaa kugu mari doona tixgelinno taxaddar leh oo ay tahay in la sameeyo.
13. Abuur qandaraasyo – Foster Swift’s Andrew Vredenburg wuxuu soo koobayaa sababta qandaraasyadu muhiim ugu yihiin macaamil ganacsi-
“Sababta heshiisyada afku ay dhib ku keeni karaan waa in dhinacyadu is beddelaan, xusuus lagu sameeyo, iyo, haa, dadku been. Haddii heshiis qoraal ah uusan jirin, garsooraha ama xeerbeegtida ayaa ku adkaan doonta go’aaminta nooca dhacdooyinka la rumeysan karo” ereygaaga ka soo horjeedda iyaga “xaalad”.
Dib u eeg qoraalkiisa buuxa oo ku saabsan “Muhiimadda Heshiisyada Qoraalka ee Ganacsiga,” ka dibna la tasho qareenka aad la xiriirtay wixii qandaraasyo gaar ah ay ugu baahan yihiin shirkaddaada. ”
14. Iibso Caymiska Ganacsiga ee lagama maarmaanka ah – Xitaa iyadoo la ilaaliyo sharciga ugu fiican, dacwadaha iyo khasaaraha ayaa dhici kara – oo dhici kara – dhaca. Badbaadinta naftaada waxay ubaahantahay waxkasta caymiska qaansheegadka, ilaa ilaalinta alaabada, ilaa khaladaadka iyo ceymiska (E&O) ee daboola shaqada aad qabaneyso. Maqaalka ‘John Boitnott’s Ent ganacsur.com’, “7 Noocyada Caymiska Waxaad u Baahan Tahay Inaad Baddesho Ganacsigaaga,” ayaa leh waxyaabo badan oo ku saabsan mawduuca.
15. Baro Shuruudahaaga OSHA – Waxay kuxirantahay nooca ganacsiga aad socodsiiso, waxaa laga yaabaa inaad ku qasban tahay shuruudaha OSHA. Macluumaadka hadda jira, ka eeg Niall O’Malley boosta- “Xaq u leeyahay Inaad Ogaato vs. Xaq u Leh Garashada- Miyuu OSHA Bedelayaa Heerarkeeda Tababarka?”
Dhaqaalaha ganacsigaaga maahan wax wax duminaya. Qaybtaan, waxaan ku dhex mari doonnaa tixgelinnada muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ku dhaqaaqdo si loo hubiyo in lacagtaada loo maareeyo si mas’uuliyadi ku jirto, meesha aad lacagtaada ku kaydsan tahay sida aad u maareeyso socodka socodkaaga lacagta.
16. Samays Koonto Meel Ganacsi – Adiga iyo IRS wax u qabso – ha u isticmaalin koontadaada bangiga shaqsiyadeed ujeeddooyin ganacsi. Samee akoonno ganacsi oo cusub oo macaamil xawaaladaha oo dhan gooni u dhig si loo fududeeyo waxyaabaha, loo yimaado waqtiga canshuurta. AJ Agrawal waxay ku leedahay wax badan oo ah waxa laga raadsado akoon bangi ganacsi ah maqaalkiisa Inc., “Sida Loogu Furo Akoon Baanan Ganacsi Bilowgaaga.”
17. Xulo Barnaamijka Xisaabaadka – Marka xisaabtaada la furo, xulo barnaamij xisaabeed oo ku takhasusay inaad isha ku hayso doolar kasta oo gala ama gala. Excel kaliya goyn maayo! Waxaad ka heli doontaa barnaamijyo la soo jeediyay oo ku saleysan cabirkaaga iyo shuruudahaaga ee Tilmaanta Ganacsiga Daily Daily ee ” Xisaabaadka Ugu Fiican ee Loogu Tala galay Ganacsiga Yaryar 2017 ‘. ”
18. Xulo Nidaamka Bixinta – Su’aal kale oo xasaasi ah oo bilow ah waa inay ka jawaabaan intaadan bilaabin waa sida lacagta loo siinayo. Ma aqbali doontaa kaararka deynta? Isticmaal nidaamka wax iibsi e-commerce sida Shopify ama Bigcommerce? Oliver Rist ee PCMag wuxuu bixiyaa isbarbardhig dhinacba dhinac ah ka caawinaya xulashooyinka kala duwan- “Sida loo Doorto Adeeg Bixin-Kordhin internet ah.”
19. Raadi Xisaabiye – Barnaamijyada barnaamijyada xisaabinta waxay fududeeyaan habka maaraynta maaliyadeed, laakiin weli waad ku fiicantahay inaad raadiso taageerada xisaabiye xirfadle. Sida David Hill saamiyo-
Maalmahan waxaa muhiim ah in laga xisaabiyo xisaabiye sida la-taliye ganacsi oo ku takhasusay arrimaha quseeya maaliyadda, sida canshuuraha, miisaaniyadda, hawlgallada meheradda, sinnaanta ganacsiga, maareynta ganacsiga iyo maareynta lacagta. jabinta tirooyinka naftaada ee qeybahaan kala duwan waa wax adkaan kara, gaar ahaan marka aad leedahay daneyn xagga hormarinta ganacsiga iyo arrimo kale oo si deg deg ah ugu baahan dareenkaaga.
Wixii intaa ka badan, fiiri maqaalkiisa oo buuxa oo ku saabsan “Maxaa Ganacsi kastaa ugu baahan yahay Xisaabiye Xirfad-yaqaan ah.”
20. Maareeya Qulqulka Lacagtaada – Xogta ka soo baxda CB Insight waxay soo jeedineysaa in maareynta socodka lacagta ay tahay sababta labaad ee ugu badan ee sababa bilowga guuldarradu. Si aad u barato istiraatiijiyadaha loo baahan yahay si ganacsigaaga yar loo badbaadiyo – ama loo hubiyo sida wanaagsan ee aad u dhaqan gasho haddaices are working
21. Maalgalinta qaansheegatooyinkaaga – Haddii aad la kulanto caqabado xagga socodka lacagta ah (ama haddii aad u maleynaysid inaad mustaqbalka uurreyso), ka eeg qaan-sheegasho ama amaah amaah shaqo oo laga yaabo inay kaa caawiyaan inaad daboosho farqiga u dhexeeya marka kharashyada ay dhacaan iyo marka lacagaha macaamiishaadu bixiyaan. Qoraalka FitSmallBusiness Jeff White wuxuu caawin karaa- “Waxa Qaansheegta Xaqiijinta Waa & Sidee U Shaqaysaa”.
Benjamin Franklin waxaa caan ku ah isagoo sheegay, ‘Adduunkan wax laguma sheegi karo inuu hubaal yahay, marka laga reebo dhimashada iyo cashuuraha.’ Maareynta canshuurta ee habboon iyo qorsheynta ayaa muhiim u ah marxaladaha hore ee ganacsigaaga, maaddaama khaladaadka lagu sameeyay ururinta iyo / ama gudbinta tirada ku habboon canshuurta ay kaa saari karto ganacsiga.
22. Go’aaminta U-Qalmitaankaaga – Ma jiraan wax baxsad ah oo loo baahan yahay in lagu bixiyo canshuurta sidii milkiile ganacsi oo yar. Si sax ah uga bilow bilow adigoo go’aaminaya u-qalmitaankaaga canshuuraha iibka, isticmaal canshuuraha, canshuuraha dakhliga, canshuuraha iskaa-u-shaqeysiga iyo mas’uuliyadaha kale ee tilmaamaha “Canshuuraha Ganacsiga” ee IRS.
23. Raadi taariikhahaaga Diiwangelinta – Ka sokow qeexitaanka waxa lagugu leeyahay iyo ciddaad leedahay, qoro goorta aad u baahan tahay inaad bixiso, maadaama ganaaxyada iyo dulsaarka canshuurta seegtay ay hoos u dhici karaan. Xisaabiyahaagu wuxuu awoodi karaa inuu kaa caawiyo sidaad u ogaan lahayd tan, ama waad hubin kartaa IRS “Kalandarka Canshuuraha ee Ganacsiyada iyo Is-u-shaqeysta” (uga faa iidee qalabkeeda shaandheynta dhacdada waxtar leh si aad u ogaato taariikhaha iyo waqtiga kama dambeysta ah ee adiga ku quseeya).
24. Deji Lacag ‘Aside Money’ – Waqtiga lagu duubo xisaabaadka bangigaaga ganacsiga ee canshuuraha lagugu leeyahay ma aha maalinta ay waajib ku tahay. Taabadalkeed, ka faa’iidayso adeegyada kaa celinaya canshuurtaada la qiyaasay markii lagu siiyo. Painless1099 waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay shaqaalaha iskood u shaqaysta, halka adeegyada mushaharka sida Gusto iyo Wagepoint ay joojin karaan cashuuraha loo-shaqeeyahaaga. Gawaarida wax iibsiga badankood waxay gacan ka geysan karaan maaraynta canshuuraha iibka, laakiin waxay xaqiijinayaan inaad adigu iska leedahay kahor intaanad lacagtaada si buuxda ugu shubin xisaabtaada jeegga.
25. Sheegista Waxyaabaha lagaa gooyay – Ka jarista cashuurta ayaa u badan milkiilayaasha ganacsiga yaryar, laakiin waxaad ogaan doontaa inay ka fududdahay inaad horay u sii qorsheysato oo aad kharashaadkaas bilowdo bilowga intii aad ka ciyaari lahayd qabashada wakhtiga cashuurta. Tilmaanta Wagepoint – “Liiska dhameystiran ee Caymiska Cashuurta Ganacsiga Yaryar” – waa goob bilow wanaagsan.
Ilaa xad, tillaabooyinka lagu soo qaatay qaybtani qaybteeda hore ee hagidan – “Tixgalinta Bilowga” – waxay ku wargalin doontaa qorshaha istaraatiijiyada ganacsigaaga. Aqoonsiga USP-gaaga, tusaale ahaan, wuxuu saameyn ku yeelan doonaa sida iyo goorta aad u aragto inuu badeecadaada-suuqgu habboon yahay, hoos ka faahfaahsan.
Si kastaba ha noqotee, qorsheynta istiraatiijiyaddu waxay ka badan tahay suuqgeynta iyo meeleynta. Waxay ka kooban tahay dhinac kasta oo ka mid ah hawlgalka hay’addaada, oo sidaas oo kale, waxay u qalantaa inaad fiiro gaar ah siiso bilowga hawsha.
26. Abuur Qorshaaga – Xusuusnow xogta laga helo CB Insight ee aan tixraacnay horaantii sheegashada maaraynta socodka lacagta ayaa ah sababaha ugu weyn ee sababa bilowga guuldaraysiga? Caqabadda kaliya ee lagu xusay inay tahay jajabinta ugu badan ee ganacsatada yar yar waxay ahayd “uma baahna suuq.” Shirkado aad u tiro badan oo la yaab leh ayaa bilaabay bilaa qorshe qorshe istiraatiijiyadeed oo run ah. Sandy Huang waxay ku faafisay khaladka qaabkan maqaalka maqaalkeeda, “Maxay Ganacsigu Koray u Baahan Yahay Qorshe Xeeladaysan?”
27. Raadi Qalabkaaga Suuqa-Suuqa – Go’aaminta haddii aad ku timid wax soo saar ama adeeg ay suuqu dhab ahaan xiiseyn karo waa tallaabo muhiim u ah geedi socodka qorsheynta istiraatiijiyadeed. Maskaxda ” Clate Mas ” wuxuu soo bandhigayaa talo soo jeedin ku saabsan helitaanka suuq-soo-saare oo ku habboon maqaalkiisa ” SmallBizTrends ‘, “Maalgeli Guushaada- Qorsheynta Istaraatiijiyadeed ee Ganacsiga Yaryar.”
28. Dejiso Qiimahaaga – Haysashada wax suuqyadu rabto waa kala badh dagaalka. Haddii aadan ku siinin qiimo ay u maleeyaan inay ku habboon yihiin, ma lihid ganacsi macquul ah. Craig Simpson, oo ka tirsan Simpson Direct, Inc., wuxuu ka hadlayaa sababaha keena qiime rafcaan ah oo lagu soo qoro mareegtiisa ‘Entrepreneur.com’, ‘Sababtoo ah Qiimaha qaar ay uga xaq badan yihiin kuwa kale. ”
29. Qorshaha Kobaca – Guul-qarisku waa riyada ganacsatada badan, laakiin is-xajista si dhakhso leh ayaa ula socota caqabado u gaar ah. Taasi waa sababta ay ugu habboon tahay in laga fekero, laga bilaabo bilowga, nidaamyada aad haysatid meesha loogu talagalay in lagu xoqo silsiladdaada sahayda, howlaha adeegga macaamiisha iyo qodobo kale. Sanduuqa maalgelinta wuxuu ku siinayaa talooyin waa weyn oo ku jira hageheeda “Kobaca vs. Scaling.”
Suuqgeynta, Sumcaynta & Xayeysiinta
Suuqgeynta, u iibiyaha, waxay umuuqataa in ay adagtahay. Xagee ku xayeysiin? Xayeysiis noocee ah ayaa ah inaad waddaan? Sideed ku hubin kartaa in farriimaha aad bixineyso ay dhab ahaan la xiriirto macaamiishaada mustaqbalka isla markaana ku dhiirigelineysa inay tallaabo qaadaan?
Guushaada ganacsade ahaan, si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay awoodaada aad ku heli karto jawaabaha su’aalahan iyo waxbadan. Talaabooyinka hoos lagu qeexay ayaa kaa caawin doona inaad bilawdid, laakiin maskaxda ku hay in suuqgeynta shirkadaada, sumadaynta iyo istiraatiijiyada xayeysiinta ay tahay wax aad tijaabin doonto waana
waqti ka dib.
30. Abuur Aqoonsiga Brand – Qiyaasayaasha qaarkood ayaa dhigaya tirada farriimaha xayeysiinta ee qofka loo soo bandhigo maalin kasta ugu dhawaan 5,000. Maaddaama aad tahay shirkad cusub oo soo geleysa giraanta, waxaad u baahan tahay astaan ​​gaar ah oo joogto ah oo ka caawin doonta macaamiisha mustaqbalka soo socota inay ku xasuusato adigoo ku jira qayladaan oo dhan. Haddii aad tahay suuqle khibrad leh ama aad suuq geynayso, Liiska 5aad ee Qoraalka Xogta – “Haga-tillaabo tallaabo ah ee Abuuritaanka Aqoonsiga Awoodda leh” – ayaa ku tusi doona sida loo bilaabayo.
31. Dejiso Miisaaniyadda Suuqgeynta – Si aad u hubiso inaadan ku dul dul-qaadin kor u qaadista aqoonsiga aad hadda abuuray, u dejiso miisaaniyad suuqgeyn macquul ah bilowga. Wendy Maynard ee Kinesis Inc. ayaa soo bandhigaysa talooyin loogu talagalay ganacsiyada yaryar ilaa shirkadaha milyan-doollarka badan ee maqaalkeeda ku jira, “Habka saxda ah ee loo dejiyo Miisaaniyadda Suuqgeynta.”
32. Dhiso Websaydh Shirkadda – Nooc kastoo noocyada khadadka xayeysiinta ah ee aad qorshaynayso inaad mustaqbalka raacdo, waxaad u baahan tahay websaydh shirkadeed. Nasiib wanaagse, teknolojiyadda maanta, uma baahnid inaad noqotaan aqoon-isweydaarsi si aad u soo bandhigto soo jiidasho, laakiin weli shaqeynaya macaamiisha mustaqbalka. Qoraalka “Michel Therlaut’s Forbes” ee maqaalka “Tallaabooyinka Muhiimka ah ee loo Dhisayo Websaydhkaaga Ganacsi ee Ugu Horeeya” ayaa ku tusi doona waxaad u baahan tahay inaad samayso, iyo sidoo kale waxa loo baahan yahay inaad boggaaga ku dhigto si booqdayaasha loogu farxo.
33. Dooro Jaanisyadaada Xayeysiinta ah – “Meelkasta oo aad joogtid” si fudud uma suurta gasho ganacsiga cusub. Si aad u doorato sida loogu qoondeeyo misaaniyadaada suuq-geynta, Guerric de Ternay ee Shirkadaha Dhiirrigelinta waxay soo jeedineysaa inaad weydiiso afar su’aalood-
a. Waa kuwee dhageystayaasha aad bartilmaameedsaneysaa?
b. Sideed u baaraandegaysaa dhaqdhaqaaqaaga suuq-geynta ee soo socota?
c. Macaamiishaadu dhab ahaantii ma aqbalaan isbeddello cusub?
d. Sidee uga faa’iideysataa kanaalka badan?
Falanqayn dhammaystiran ee su’aal kasta, eegno maqaalkiisa oo dhammaystiran – “Ma Hubtaa inaad Ku Xayeysiiso Meelaha Saxaafadda Saxda ah?”
34. Aqoonso Kheyraadka Looga Baahan Yahay in Uu Meelmariyo Qorshahaaga – OnStrategy’s Erica Olsen waxay wadaagaan tirakoob aad uqurux badan- 86% milkiilayaasha ganacsiga iyo maareeyayaashu waxay ku qaataan wax ka yar hal saac bishii inay ka wada hadlaan istiraatiijiyad. Bilow ahaan, awood uma lihid inaad ku shaqeyso mugdiga. Ka eeg tilmaamkeeda buuxa “Hirgelinta Istaraatiijiyadeed” si loo go’aamiyo sida ugu wanaagsan ee loo bilaabi karo kanaalka xayeysiinta ee aad u dooratay shirkaddaada.
35. Cabiro Natiijooyinkaaga – Ugu dambeyntiina, cashar ka qaado Peter Drucker, kaasoo caan ku ahaa ” Wixii cabbira, waa la maamulaa. ‘ Hubso in dollar kasta oo aad u gasho ololayaasha suuqgeynta shirkaddaada ay soo saareyso soo laabasho wanaagsan, iyadoo la adeegsanaayo talooyinka la wadaago ee wareegga Angela Stringfellow- Waxtarka Suuqgeynta- 30 Khubaradu waxay shaaca ka qaadaan Siyaabaha ugu sareeya ee lagu cabiro wax ku oolnimada ololaha suuq geynta.
Milkiileyaasha ganacsiyada ee aad u fara badan ayaa macaamiisha macaamiisha ula macaamilaan sidii wax ka dambeeya – wax ay qaban doonaan markii amarro soo galaan.
Shirkadaha ugu guulaha badan, dhanka kale, waxay ogyihiin in macaamiisha ay yihiin agabyadooda ugu qaalisan. Iyaga oo isku dayaya in ay sii haystaan ​​(iyo, laga yaabee, in ay u gudbiyaan dadka kale ganacsiga), waxay u arkaan adeegga macaamiisha sidii fursad ay ku farxaan macaamiishooda isla markaana ay u dhisaan xiriirrada wanaagsan ee looga baahan yahay guusha shirkadda muddada dheer.
36. Dejiso Nidaamka Dib-u-noqoshadaada / Lacag Celinta – 40% dukaameeysatada internetka ayaa sheegaya inay ku dhibtoonayaan inay ka helaan siyaasado soo-celinta websaydhada iibiya. U fududee macaamiishaada inay helaan macluumaadka ay u baahan yihiin, oo ay u isticmaalaan soo noqoshadaada iyo soo celinta siyaasadaha si loo baabi’iyo cabsi kasta oo ay ka qabaan inay ka iibsadaan ganacsade cusub.
Haddii aad leedahay ganacsi khadka tooska ah ah, ka fiiri Quaderno ‘Tilmaanta Milkiilaha Ganacsiga Dijital ah ee Lacag Celinta. ” Haddii aad ku ordeyso meel leben-iyo-hoobiye ah, eeg eeg maqaalka QuickBooks, “Sida Loo Sameeyo Siyaasad Soo Noqoshadeed oo Meheraddaada Yar Yar ah.”
37. Aqoonso Xawaaladaha Codsiga Adeegga Macaamiisha – Taageerada iimaylka waa wax bixin, iyo haysashada lambar taleefan inta badan warshadaha. Laakiin maxaa ka mid ah kanaalada kale, sida warbaahinta bulshada ama baraha bulshada? Len Markidan, ayaa tilmaamtiisa ku jira Groove, “Waa maxay kanaalada ugu waxtarka badan ee loogu talagalay Taakulaynta Macaamiisha?”, Ayaa xusaya, tusaale ahaan, in shirkadaha iska dhego-tiraa codsiyada taageerada warbaahinta bulshada ay u arkaan celcelis hoos udhac ah oo ka hooseeya 15% shirkadaha aan diidin. . Fiiri tilmaamaha buuxa ee toddobada dariiqadood ee adeegga macaamiisha si aad u tixgeliso.
38. Si dhakhso leh uga jawaab Macaamiisha – Drew Hendricks, u qoritaanka SmallBizTrends, waxay wadaagaan intaas-
“Boqolkiiba 91 macaamiisha ma caban karaan markii aysan faraxsaneyn sababta oo ah waxay u maleynayaan in waqti la siiyo siinta jawaab celinta aysan u qalmin waqtiga sababtoo ah ganacsigu si fudud uma daneeyo. Laakiin hadii macmiilku ogaado haddii ay jirto jawaab degdeg ah , Boqolkiiba 81 waxay sheegteen inay ganacsiga siin doonaan jawaab celin.
Halkan ka daawo maqaalkiisa oo buuxa halkan, ama ka eeg Zoho ‘Tilmaanta Isticmaalka Wadahadalka Tooska ah si loo Koro Ganacsigaaga “hal hab oo ah kaxaynta jawaabaha macaamiisha dhakhsaha leh.
39. Maalgalinta dusha saarista – Onboarding kaliya kuma eka shaqaalaha. Markii loo isticmaalay in macaamiisha si dhakhso leh loogu dubo badeecad cusub, dul saarista dusha sare waxay leedahay awood ay ku kordhiso qanacsanaanta,
hoos u dhigga churn iyo ka kaxaynta tixraaca macaamiisha faraxsan iyo rajooyinka cusub. Lincoln Murphy oo ka socda lix iyo toban Ventures ayaa leh inbadan oo maqaalkiisa ah, “Sirta ku socota Guusha Macaamiisha Guusha.”
Hal-abuurnimo & Fulin
Su’aalaha alaabada iyo fulintu ma khusayso dhammaan ganacsiyada, laakiin kuwa u qorsheeya inay u isticmaalaan alaabada jirka (ama badeecadaha laftooda ama alaabada adeegyada dheeraadka ah, sida taargooyinka iyo koobabka makhaayadda), tixgalinta hoos ku qoran ayaa ah muhiimad muhiim ah.
40. Aqoonso Alaab Soo Saarayaasha – Alaab-qeybiyeyaasha aad dooratid inaad la shuraakootaan waxay leeyihiin awood ay ku sameystaan ​​ama ku burburaan ganacsigaaga. Waxaad u baahan tahay la-hawlgalayaal ku siin kara wax soo saar joogto ah, inta aad u baahan tahay, qiime aad awoodi kartid. Tom Greco oo ka tirsan Thomasnet.com wuxuu bixiyaa talo qiimo badan oo ku saabsan raadinta alaab-qeybiyeyaasha mustaqbalka maqaal cinwaan looga dhigay, “11 Talooyin oo Caawinaya Aqoonsiga Bixiye Lagu Kalsoonaan karo.”
41. Xullo Bixiyeyaashaada – Markaad aqoonsato alaab-qeybiyeyaasha suurtagalka ah, waa inaad go’aan ka gaartaa kuwa aad horay ugu soconayso markaad ganacsi bilaabayso. Greg Hong, oo wax u qoraya Ganacsadaha, ayaa soo jeedinaya tixgalinta afar arrimood oo ku saabsan go’aannadaada, dhererka ballanqaadkaaga, daacadnimadaada iyo khibraddaada. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah waxaa laga heli karaa maqaalkiisa oo dhammaystiran – “4 Furayaasha Loogu Doorto Bixiyaha Saxda ah.”
42. Maaree Xiriirka Wax Soo Saaraha – Ka-goynta amar iibsasho bilow ah ma aha xaddiga maaraynta alaab-qeybiye habboon. Maalgashiga xiriirka aad la leedahay alaab-qeybiyeyaashu waa muhiim sidoo kale waa in la dhiso xiriirro lala yeesho macaamiishaada. Spencer Smith oo ka socda TechTarget wuxuu ku tusayaa sida loo sameeyo qaybtiisa, “Maareynta Xiriiriyaha Xiriiriyaha-Dhaqanka ugu Fiican ee Bixiyeyaasha Xalka.”
43. Si habsami leh u maaree Mawduucyada Inventory – Waxaad dooratay alaab-qeybiyeyaasheeda oo aad heshay alaabadaada. Hadda maxaad sameyneysaa Kaydinta Noloshu waxay bixisaa doodo aad u wanaagsan oo ku saabsan waxkasta oo ka yimaadda abuurista nidaamyada maaraynta alaabada illaa u kaydinta alaabadaada si sax ah maqaalkooda, “Sida si hufan loogu Maareeyo Ganacsiga Ganacsiga Yaryar.”
44. Ku celcelinta xakamaynta alaabada wanaagsan – Kontroolka alaabada ma aha wax la mid ah maareynta alaabada. Sida uu qabo Robert Lockard’s Fishbowl Inventory’s Robert Lockard, “Kontaroolka alaabada wuxuu ku lug leeyahay la socodka alaabadaada, tirinta alaabada, iyo abuurista warbixinno si ay kaaga caawiyaan dhimista qarashka, kordhinta isugeynta badeecada, iyo lacag keydinta.” Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mowduuca, fiiri fiidiyowgiisa- “Whiteboard Arbacada- Waa maxay Xakamaynta alaabada?”
45. Geedi socodka Meelmarinta Balaadhinta – Muxuu fiicanyahay in wax soo saar weyn leh haddii macaamiishaadu ay sugaan toddobaadyo inay helaan? Ka dhig iyaga inay ku farxaan adigoo dadajinaya habsami u socodka maraakiibtaada, iyagoo ku sawiraya tilmaamaha laga helay maqaalkii gacanta ee Monica Orrigo, “Sida loo Hagaajiyo Nidaamkaaga Amarkaaga Oofinta.”
46. ​​Fahmida Soo Dejinta / Dhoofinta Caalamiga ah – Soo dejinta / dhoofinta caalamiga ah waxay noqon kartaa wax ay shirkadaadu gasho- in kasta oo wax soo saarka caalamiga ah xaqiiqdii aysan shuruud u aheyn sameynta ganacsi guuleysta. Haddii aad go’aansato inaad gasho jidka dibedda, ogow naftaada nidaamka guud adigoo adeegsanaya maqaal lagu daabacay The Balance oo uu daabacay Laurel Delaney oo ku saabsan “Sida loo Bilaabo Ganacsiga Soo dejinta / Dhoofinta.”
Tilmaanta Oberlo ee daadinta
Wadada dhexdeeda, waxaad go’aansan kartaa inaad la timaadid shaqaalaha si aad u ballaadhiso tirada shaqada aad awood u leedahay inaad qabato. Haddii lagu maalgeliyey maalgelin ganacsi, maalintaas waxaa laga yaabaa inaysan intaas sii fogeyn mustaqbalka, maaddaama taageerayaashaadu ay kaa filayaan inaad dhisto kooxda looga baahan yahay inaad ku guuleysato aragtidaada sida ugu dhaqsaha badan.
Iyada oo aan loo eegeyn waqtigaaga, si guul leh noqoshada loo shaqeeye – sida inbadan oo ka mid ah qaybaha kale ee halkan lagu qeexay – waxay u baahan tahay waqti iyo diyaarin. Waqti sii si aad ugala hadasho mid kasta oo ka mid ah talaabooyinka soo socda si ku habboon, intii aad si dhakhso leh ugu degdegi lahayd marka shaqaalahaaga koowaad uu albaabka dhex maro.
47. Qor Buug-gacmeedka Shaqaalaha – Buug-gacmeedka shaqaaluhu wuxuu u ekaan karaa dadaal aan loo baahnayn – gaar ahaan markii ugu horreysa ee aad billaabaneyso. Si kasta oo ay tahayba, dhab ahaan waa aalad awood badan oo sharci ah oo dejineysa heerarka shaqada ee shirkaddaada, oo ilaalineysa adiga iyo shaqaalahaagaba. Haddii aadan waligaa qorin dokumentiga noocan ah kahor, waxaad arki doontaa qormada Maqaalka “Buug-gacmeedka Shaqaalaha – Sida loo qoro Midka iyo Waxa lagu daro” inay noqoto mid waxtar leh.
48. Fiiri sharciyada Nidaamkaaga Shaqada – Haddii aad go’aansato in aad qorto buug-gacmeedkaaga shaqaalaha ah, ha yeelato qareen eegis iyo heshiisyada kale ee shaqo ee aad isticmaasho. Waxay kuxirantahay gobolkaaga, qaab dhismeedkaaga sharciyeed iyo cabirkaaga, tusaale ahaan, waxaad ubaahantahay inaad isticmaasho ereybixin qaas ah oo kusaabsan midab kala soocaaga ama dhaqamada aad ku shaqeyso. Tilmaanta Nolo ee “Giraysiga Qareen ee Arrinta Shaqada” ayaa kaa caawin kara inaad hesho qareenka ku habboon.
49. Shaqaaleysiiya shaqaalaha saxda ah – Shaqaaleynta shaqaalaha saxda ah waxay ka badan tahay dhejinta liiska shaqo iyo xulashada codsadaha ugu horreeya ee albaabbada dhex mara. Tusaale ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad
a. Go’aanso doorka ay shirkaddaadu u baahan tahay t
o marka hore buuxi.
b. Samee sharraxaado shaqo oo kaa caawin doona inaad hesho shaqaalaha ugufiican ee buuxiya baahiyadan.
c. Ku dhaji shaqadaada adeegyada ay u badan tahay inay gaaraan murashaxiintaada kugu habboon.
d. Wareysiga loo balan qaadayo musharixiinta.
e. U samee shaqooyin rasmi ah musharrixiinta la door bidaayo.
Waxaa jira sabab ay xirfadlayaashu ugu adeegaan shaqadooda oo dhan si ay u maareeyaan ilaha aadanaha. Adigu waxaad liidataa dhibaato liidata maareynta hawsha adiga kaligaa ah – waxaad dusha u saaran tahay mas’uuliyadaha kale ee ay u baahan tahay shirkaddaadu – laakiin waad ku dardargelin kartaa qaloocaaga waxbarasho ee hagaha Adam Bryant ee “Sida loo Shaqeeyo Qofka Xaq ah,” oo ay daabacday New. Joornaalka Times.
50. Hayso Diiwaannada Shaqaalaha ee Wanaagsan – Jannada waxay mamnuucaysaa shirkaddaadu inay la kulanto fal sharci darro shaqo joojin mustaqbal ama si ficil ah oo sharci ah – haddii ay taasi dhacdo, waxaad ku farxi doontaa inaad waqti qaadatay si aad u abuurto nidaam diiwaangelin shaqaale. Susan Heathfield ee The Balance waxay ku siisaa talooyin xoogaa maqaalkeeda ah, “Diiwaannada Shaqaalaha- Maxaa Diiwaangelinta Shaqaalaha Loogu Baahan Yahay Loo-shaqeeyayaashu?” Iyaga maskaxda ku hayso, oo ka dhig dukumiintiyo joogto ah qayb ka mid ah howlahaaga gudaha.
51. Hagaajinta xirfadahaaga Maareynta iyo Hoggaaminta – Ahaanshaha ganacsade weyn iyo maamule weyn waa waxyaabo aad u kala duwan. Sababta oo ah inaad haysid fikrad fiican macnaheedu maahan inaad si otomaatig ah u awoodi doontid inaad ku qorto shaqaalahaaga aragtidaada ama aad ku mashquuliso shaqaalaha si ay u soo saaraan shaqadooda ugu wanaagsan.
Haddii aadan ku kalsoonayn xirfadahaaga maaraynta, fiiri MindTools ‘Xirfadaha Maareynta Kooxda- Xirfadaha Xuddunta ah ee Looga Baahan Yahay Maareynta Kooxdaada “iyo WagePoint’s’ Tilmaamaha Guusha ee Maareynta Shaqaalaha” hagida. Ama, haddii aad rabto inaad horumariso awooddaada hoggaamineed, booqo tilmaamaha ganacsi ee ‘Xero’ ee ‘Hagaad u Noqoto Hoggaamiye Wax-ku-ool ah – 10 Talooyin.
52. Faham edbinta Shaqaalaha – Haddii aad leedahay shaqaale, waxaad ugu dambeyntii la kulmi doontaa xaalado kaaga baahan inaad edbiso. Hubso in nidaamkaaga edbinta iyo qawaaniintaadu ay ku habboon yihiin maqaalka BizFiling ee ku saabsan sida edbinta shaqaalahaaga ay ugu baahan tahay siyaasad sharci-sharci ah.
53. Samee Dib-u-fiirinta Waxqabadka Shaqaalaha – Haddii aad shaqaale ahayd, waxaad ogtahay inay jiraan waxyaabo qaar kuwa adduunka shaqada ka mid ah ay u yimaadeen dib-u-eegista waxqabadka (iyo badanaa, kordhinta magdhowga ee iyaga ku xidhan) ayaa ka mid ah waxyaabahaas. Bixinta jawaab celinta waxtar leh, jawaab-celin wax ku ool ah uma imaan karto si dabiici ah dhammaan ganacsatada. Haddii aad naftaada isku tiriso kooxdan, waxaad siisaa Sharlyn Lauby ‘Lix Talooyin Caawimaad leh oo ku Saabsan Sida Loo Sameeyo Shirka Falanqeynta Waxqabadka “akhris.
Maareynta mushaharka waxaa lagu wareejin karaa qaybta “Noqoshada loo-shaqeeye” qeybta kore, laakiin waxaan dareennay taas, maxaa yeelay waxaa muhiim ah in la saxayo – oo ay shisheeye u tahay milkiileyaasha ganacsiyada badan ee cusub – waxay mudan tahay fiiro gaar ah kaligeed.
54. Ogow Waajibaadkaaga Xereynta Sharciga ah – Ma ogeyd, markii aad shaqaaleysiinayso shaqaale cusub, in lagaa doonayo inaad u sheegto gobolkaaga haddii ay ku xiran yihiin laaluushka mushaharka? Ama waxaad u baahan kartaa inaad haysato nuqulo waraaqaha ah ee foomamka I-9 ama dukumentiyada xaqiijinta aqoonsiga? Hagayaasha ‘SBA’s’ ee Warbixinta Kirada ee Cusub ee Gobolkaaga ‘ayaa kaa caawin doonta inaad dejiso nidaamyada ku habboon.
55. Samayso Nidaam Mushahar – Hadda oo aad leedahay shaqaale, waxaad u baahan doontaa inaad iyaga bixiso. Nidaamyada mushaaradu waxay ka qaataan inta badan kakanaanta nidaamka; waxbadan ka baro qodobka Wagepoint ee “Bilaabashada Mushaharka Ganacsiga Yaryar – 7 Talaabooyin Fudud.”
56. Dooro Faa’iidooyinka Aad Bixin Doontid – Macaashka aad ku soo dartid xirmadaada magdhowga waa in laga tixgeliyaa mid dhaqaale iyo mid sharci labadaba. Bixinta xulashooyinka badan ama caymis dheeraad ah ayaa kordhin kara kharashyadaada, dabcan, laakiin waxay sidoo kale u suurtogelin kartaa ganacsigaaga inuu soo jiito oo uu sii haysto karti sare. Qiyaas faa’iidooyinka iyo qasaarooyinka faa’iidooyinka kala duwan ee Tilmaanta Harvard Business Review ee tilmaanta “Faa’iidooyinka Shaqaalaha Loogu Jecel.”
57. Raadi bixiyeyaasha Adeegga Macaashka / Faa’iidooyinka (ceymiska caafimaadka, naafanimada, iwm) – Marka aad ku xalliso faa’iidooyin gaar ah – ha ahaato caymiska caafimaadka, ilaalinta naafonimada, koontada 401k ama barnaamijyada kaalmada shaqaalaha ee ballaaran – waxaad u baahan doontaa bixiyeyaasha si ay u maareeyaan waxyaabaha loo baahan yahay. qorshayaasha. Christy Hopkins waxay ku siisaa hage dhameystiran oo ku saabsan qorsheynta maareynta iyada “Tilmaanta siinta Caymiska Caafimaadka ee Mulkiilayaasha Ganacsiga Yar yar” ee FitSmallBusiness.
58. Go’aanso Ayaa Bixin doona Macaashka – Adeeg bixiyeyaashaada gargaarka ayaa kaa caawin doona go’aaminta qarashka ugu dambeeya ee hirgelinta mid kasta oo ka mid ah barnaamijyada aad soo jeediso, iyadoo ku saleysan koox kasta ama qiimo dhimis kasta oo aad u qalmi karto. Hadda, waxaa la joogaa xilligii la go’aansan lahaa waxa ay shirkaddaada ka bixin laheyd waxa aad ka codsanaysid shaqaalaha inay bixiyaan. Warbixinta ‘FitSmallBusiness’ ee Hopkins ee Dheeraadka ah – ‘Faa’iidooyinka Shaqaalaha- Hagaha Ugu Dambeeya ee Milkiilayaasha Ganacsiga Yaryar’ – ayaa kaa caawin kara inaad ka jawaabto su’aashan, iyo kuwa kale.
Amniga ‘cyber Security’ kaliya maahan mid khuseeya muwaadiniinta waaweyn ee badan. Maalmahan, ku dhawaad ​​meherad kastoo ganacsi ayaa kaydisaa nooc ka mid ah macluumaadka macaamiisha sida gaarka ah loo leeyahay – taasina waxay qatar gelineysaa ganacsi kasta inuu galo tha
t data jebiyey.
Iyadoo aan la shaqaaleysiinin khubarada ugu sareeya dambiyada internetka, ma jiri karto dariiq ay milkiilayaasha ganacsigu ku damaanad qaadaan in xogtooda aan la jabin. Taasi waa waxa ka dhigaya talaabooyinka soo socdaa kuwo muhiim ah.
59. Caymiska Iibka Caymiska – Sanadka 2015, sida ku xusan Symantec “Warbixinta Hannaanka Amniga Internetka,” 318 jebinta amniga ayaa kashiftay in ka badan 429 milyan oo aqoonsi. Iyo boqolaal milyan oo kala duwanaansho cusub oo malware ah lagu daray sanad kasta, isla warbixintaas, uma badna in noocyada dambiyada noocaan ah ay u badan tahay inay goor dhow baxaan.
Caymiska internetka ayaa laga yaabaa inuu kuu soo celiyo waxoogaa ah, haddii ugu xun ay ku dhacdo ganacsigaaga. Marka loo eego kobciyaha IT-ga Australiyaanka Kiandra, “Caymiska ‘cyber insurance wuxuu siiyaa ganacsi hubinta in haddii aysan ka hortagi karin weerarka internetka, ugu yaraan ay iska hubin karto waxyaabaha qaar.’ Ka baro waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan mawduuca maqaalkooda, “Muhiimadda Caymiska Caymiska ee 2017-ka.”
60. Qaad Talaabooyinka lagama maarmaanka ah si aad u Dhowrto Xogta Macaamiishaada – Dabcan, waa inaadan ku kalsoonayn caymiska internetka kaliya si aad u daboosho ganacsigaaga. Aad ayey ugafiican tahay in laga hortago weerarada halkii laga caymi lahaa midka, maxaa muxuu ugu habboon yahay qaadista tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee gudaha lagu difaacayo hantidaada dijitaalka ah. Shirkadda Indusface ee Venkatesh Sundar ayaa ku bixisay hal istaraatiijiyad noocaas ah maqaalkiisa, “Waa tan Sidaad Ku Xaqiijin Kartid Codsiyada Codsiyada Mobilada.”
61. Haysatid Qorshe Ku-xadgudubka Xogta – Haddii ay waxa ugu xun dhacaan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad si dhakhso leh oo dhakhso leh uga jawaabto haddii aad haysatid qorshe jira ka hor inta uusan jabinku dhicin. Waxkasta oo Bilaabmaya Waxay U Baahan Yihiin Inay Ogaadaan Amaanka
U diyaar garowga Qorsheynta Guusha Ganacsiga Yaryar
Hagahani ma daboolayo dhammaan tixgalinta lagama maarmaanka ah ee la sameeyo markii la bilaabayo ganacsi cusub; Baaxadda iyo kakanaanta loo baahan yahay si loogu sameeyo dhammaan ganacsiyada, nooc kasta ha ahaadeene, waxay ahaan laheyd mid weyn.
Waxa aad heli doontid, si kastaba ha noqotee, inaad ka shaqeysid mowduucyada aan kor ku soo xusnay ayaa adiga iyo shirkaddaada sii kordheysa ka dhigaya meel aad uga xoog badan kuwa ganacsatada ah ee lugta ku soo jiifa marka hore qorshe la’aan. U adeegso liistadan sidii bood bood booda. Xulo ilo ku habboon baahiyahaaga, oo qoro wixii su’aalo dheeri ah ee cilmi-baaristaadu ku soo kordhiso baaritaanka mustaqbalka.
Dadaal xoogaa hormaris ah, waxaad si fiican ugu meelayn doontaa guusha mustaqbalka ee warshadahaaga cusub.
61 ESSENTIAL STEPS FOR STARTING A BUSINESS 61 ESSENTIAL STEPS FOR STARTING BUSINESS business tips ESSENTIAL STEPS FOR STARTING A BUSINESS STEPS FOR STARTING A BUSINESS